९१ % जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा, कतिले प्रयोग गर्छन फोरजी ? - Arthatantra.com
९१ % जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा, कतिले प्रयोग गर्छन फोरजी ?
काठमाडौं । नेपालमा कुल जनसंख्याको ९१.५५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार २ करोड ७७ लाख ६ हजार ७११ जना नेपालीको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । जसमा नेपाल टेलिकमको १ करोड ३८ लाख ६८ हजार ३५८, एनसेलको ७२ लाख ६७ हजार ३२० जना र स्मार्ट टेलिकमको १ लाख ५१ हजार ७१५ जना ग्राहकले इन्टरनेटको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ७६ लाख ६४ हजार ३५९ जनाले फोरजी प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा तीन वटा कम्पनीले फोरजी सेवा दिइरहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी एनसेलका ग्राहक रहेका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम दोस्रो स्थानमा रहेको छ र भने स्मार्ट टेलिकम तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
७६ लाख ६४ हजार ३६९ जनाले फोरजी प्रयोग गर्दा बढी हिस्सा एनेसेलको रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ४८ लाख ५ हजार २१५ जना ग्राहकले एनसेलको फोरजी प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपाल टेलिकमको फोरजी प्रयोग गर्ने ग्राहक २७ लाख ७ हजार ४२९ जना रहेका छन् भने मार्ट टेलिकमको फोरजी प्रयोगकर्ताको संख्या १ लाख ५१ हजार ७१५ जना पुगेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा १ करोड २० लाख ५२ हजार ६७५ जनाको पहुँचमा थ्रिजी इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी हिस्सा नेपाल टेलिकमको रहेको छ । टेलिकमको ९५ लाख ९० हजार ५७० र एनसेलको २४ लाख ६२ हजार प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।
वि.सं.२०७८ साउन १५ शुक्रवार १७:४६ मा प्रकाशित
अघिल्लाे आईपीओ निष्काशन प्रस्तावसहित भदौ ५ गते सुपरमाई हाइड्रोपावरको साधारणसभा, लाभांश पनि वितरण गर्ने
पछिल्लाे मैलुङ खोला हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदनको ओइरो, साढे ११ लाख बढीले दिए